Wararka Maanta: Axad, Apr 14, 2019-Magaalada Muqdisho Qof ku dhintay darbi ku soo dumay
Axad, April, 14, 2019 (HOL) - Hal qof ayaa ku dhintay mid kalana wax yeello ayaa ka soo gaartay kaddib markii uu ku soo dumay darbiga Garoonka Kubadda Cagta Jaamacaddaha degmada Hodan ee magaalada Muqdisho.
Dad ku sugan goobta ayaa sheegay in qofkan dhintay laga soo saaray darbiga dumay hoostiisa kaddib markii gurmad ay sameeyeen dad kale oo goobta ka agdhawaa.
Waxaa kaloo isla darbiga dumay laga soo hoos saaray qof kale oo wax yeello jirka ah ay soo gaartay sida goobjoogayaashu sheegeen.
Waa markii labaad uu soo dumo qeyb ka mid ah Garoonka Kubadda Cagta Jaamacadaha ee Magalada Muqdisho,waxaana dhacdadii hore aysan dad wax ku noqon,balse markaan ay ka dhasheen khasaaro dhimasho iyo dhaawac ah.
Dhismaha Garoonka ayaa qeyb ka ahaa mashaariic c ay FIFA ka fulisay gudaha Soomaaliya, iyaga oo kaashanaya xiriirka Kubadda Cagta Soomaaliyeed.